Yusuf Garaad: Qaraxa Maanta ka dhacay Muqdisho
Qaraxa Maanta ka dhacay Muqdisho
Dad saaka guryahooda nabad uga soo toosay, dagaal aan aadin ee u soo baxay in ay carruurtooda quud xalaal ah u soo qaraabtaan ayaa subaxnimo hore naftooda la gooyay. Waxaa dilay lana dhintay nin aanay garaneyn, isaguna aan aqoon.
In ka badan 10 ruux oo rayid u badan ayaa ku dhintay qarax maanta lagu qaaday waddo hor marta Gegida Dayaaradaha ee Aden-Cadde oo ay adeegsadaan shacab badan oo nolol maalmoodkooda raacanaya. Allah ha u naxariisto.
Qaar kale wey ku naafoobeen.
Wax digniin ahi kama horreyn qaraxa. Sidaa darteed qof kasta oo Muqdisho jooga wuu ku dhiman kari lahaa haddii uu bartaas joogi lahaa. Si kale haddii aan u dhigo ma jirto cid looga aabba yeelayay in uu ku dhinto qaraxa.
Dadka la dilay Carruurtoodii maanta geeri ayaa gashay oo meyd-ka waalidkood ayaa u yaalla. Wey agoontoobeen ama ay rajoobeen. Waa dhib iyo murugo ay la noolaan doonaan muddo dheer waaba haddii ay badbaadaane.
Rabbi ha u sakhiro dhibka soo gaaray.
Qoysaskooda ka sokow, dadka la dilay waa cudud ka luntay Soomaaliya, waana dhiilo wiiqi karta Soomaalinnimada.
In dad la dilo, qaar kale dhaawac lagu naafeeyo, in kale lagu rido sas maskaxdooda wax u dhima, welibana ay yihiin dad aan waxba galabsan, daafacna aan haysan iyo in dhisme la burburiyo xal kuma imaanayo, qof libin ku gaarayaana ma jiro.
Ummaddaan Soomaaliyeed ee dhibka badan soo martay, welina dhib kale uu haysto, waxay geesinnimo ku jirtaa qofkii qof badbaadiya, qofkii cudur iyo gaajo ka badbaadiya, horumar la tiigsada, wacyi gelin la barbar taagan, horseeda in uu dadku is nabad geliyo, is caawiyo welibana uu iskaashado.
Ilaahow Soomaali u gargaar.
Posted by Yusuf Garaad at 11:42:00
Yam Yam yeen "Soomaali baan Ahay"
Hillary, Haweenka iyo Hoggaanka
Koomadii ma ka soo baxday? Mise...
Cayaaraha Dowlad-Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir...
Maxkamadda Hague oo bad ka xukuntay Shiinaha
David Cameron iyo Soomaaliya
Taageeray Tuk Tuk
Cameron iyo Erdoğan, laba Saaxiib oo Soomaaliya
Danjire Cadde oo Moscow u ambabaxaya